जब तपाईं सबै एक हथौडा छ, Isis एक नङ जस्तो देखिन्छ - समाचार नियम
जब तपाईं सबै एक हथौडा छ, Isis एक नङ जस्तो देखिन्छ
शीर्षक यो लेख “जब तपाईं सबै एक हथौडा छ, Isis एक नङ जस्तो देखिन्छ” एचएएल द्वारा लेखिएको थियो 90210, लागि शुक्रवार 20 औं नोभेम्बर मा theguardian.com 2015 12.35 UTC
जब तपाईं सबै एक हथौडा छ, सबै एक नङ जस्तै हेर्न सुरु. त्यसैले सायद यसको सबैलाई र आफ्नो कुकुर Isis सामना गर्न कसरी लागि एक हत्यारा विचार संग parapet माथि पप जब कि आश्चर्य छैन, तिनीहरू सबै तिनीहरूले सधैं गरिरहेका छन् धेरै नै कुरा गरिरहेको सुझाव जस्तो देखिन्छ.
उदाहरणका लागि, तपाईं प्रतिलिपि अधिकार वकील हुनुहुन्छ भने, त्यसपछि स्पष्ट जवाफ प्रतिलिपि अधिकार कानून प्रयोग गरेर पनि समावेश. किनभने Isis हजारौं वध गर्न पाउँदा खुसी हुन सक्छ, तर तिनीहरूले घर-टेप हत्या संगीत छ भनेर थाह.
पावलले Rosenwig, मातृभूमि सुरक्षा परामर्श कम्पनी रातो शाखा को संस्थापक, एक धूर्त योजना छ. "के, केहि भने, तिनीहरूले स्वेच्छाले गर्न अनिच्छुक हुँदा खाता तल लिन प्रदायकहरू compel गर्न सकिन्छ? जवाफ, मेरो मनमा, डिजिटल मिलेनियम प्रतिलिपि अधिकार ऐनको एउटा analogy मा निहित (DMCA)."
तिमीलाई थाहा छ, को DMCA, अमेरिकी कानून जो, का इमानदार हुन गरौं, इन्टरनेट को सरकारी निरीक्षण को मुश्किल पानी नेभिगेट लागि पूर्ण रूपमा पूर्ण इन्टरनेट बाट अवैध सामग्री हटाउने र त्यसैले सफल भएको कानून को एक मोडेल टुक्रा हुन सक्छ छैन.
Rosenwig गरेको विचार सुरुचिपूर्ण छ, एक किसिमले. तपाईं प्राप्त गर्न सक्छन् भने स्वेच्छाले Isis प्रचार तल लिन कसैले, जारी यसलाई पाहुना एक अपराध हो भनेर त यो बनाउन. तर कुनै पनि अपराध - प्रतिलिपि अधिकार कानून विरुद्ध अपराध, इन्टरनेटमा अपराध को सबैभन्दा खराब क्रमबद्ध, हुनसक्छ.
आफ्नो प्रस्ताव सरकार मंजूर तेस्रो-पक्ष एक आतंकवादी संगठन संग सम्बन्धित कुनै पनि सामाग्री प्रतिलिपि अधिकार दावी गर्न अनुमति हुनेछ, र त्यसपछि आफ्नै लिन-तल सूचनाहरू आगो.
निश्चय पनि ... पक्कै त्यहाँ भन्दा एक छरितो समाधान छ?
हामी रोमी पल्टनमा छन्. हामी धेरै छन्. हामी कहिल्यै gonna अप तपाईंलाई छन्
अज्ञात पक्कै त्यसैले आशा. यो अन्य चरम गर्न हथौडा / नङ cliche लिएको गर्नुपर्छ: तपाईं हथौडा "को इन्टरनेटमा वरिपरि arsing शक्ति" हुँदा, त्यसपछि आषा तपाईं एक साँच्चै साँच्चै लक्षित तरिकामा वरिपरि arsing द्वारा अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवाद को शक्तिहरू पराजित गर्न सक्नुहुन्छ.
पछि यसको Isis संग "युद्ध" reaffirming दिन मा पेरिस आक्रमण निम्न, को hacktivist सामूहिक मुकाबला Isis प्रचार मा केही ठोस सफलता अनलाइन थियो.
एक सय हजार ट्विटर खाता लिइएको छ र पाँच हजार युट्युब भिडियो रिपोर्ट, र पछि हटाइयो, सेवा, को cyberwar जनवरी मा सुरु देखि. थप controversially, अज्ञात पनि हमला सेवा वितरण इन्कार संग Isis-संबद्ध समूह को वेबसाइट bombarding गर्न लिएको छ, एक प्रयास मा अफलाइन तिनीहरूलाई दस्तक गर्न.
यो छ यस्तो प्रयास वास्तवमा Isis विरुद्ध ठूलो आन्दोलन मदत कति debatable, तर प्रयास बेनामी को मात्रा कारण प्रभावशाली छ तिर राख्दै छ.
तर बेनामी संलग्न सबैले आतंक को दुनिया चढेर पूर्णतया समर्पित छ. केही दोस्रो प्रेरणा छ: को lulz. कुन नवीनतम प्रस्तावित चाल व्याख्या हुन सक्छ. अज्ञात मृत्यु Isis रीस उठाउनु गर्ने योजना बनाए द्वारा रिक रोलिंग उनीहरु.
हाम्रो आगामी कार्य: rickrolls संग स्पैमिंग प्रमाणित आईएसआईएस hashtags. यसलाई संकलित हुने बित्तिकै सूची जारी गर्नेछन्.
- #OpParis (@opparisofficial) नोभेम्बर 18, 2015
इन्टरनेटमा पनि धेरै समय बिताउनुभयो जो धेरै ज्यादा सबैको छोटो ध्यान फैलिएको दिइएको - हैल 90210 समावेश - योजना लाल शाखा गरेको अजीब प्रतिलिपि अधिकार विचार रूपमा fruition हेर्न बारेमा रूपमा संभावना छ. तर हामी मितिसम्म राख्न छौँ.
31511	0 अज्ञात, लेख, blogposts, ह्याकिङ, एचएएल 90210, इन्टरनेट, इस्लामी राज्य, स्पाम फिल्टर, प्रविधि, विश्व समाचार
← यो एक मौन खरीद लायक छ, पंखा बिनाको पीसी? अलविदा गोपनीयता, नमस्ते 'Alexa': अमेजन इको, यो सबै सुन्नुहुन्छ गर्ने घर रोबोट →